အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ - အမျိုးသားများအတွက်နမူနာပြproblemနာနှင့်ပြnonနာမရှိသောအသုံးပြုမှုပုံစံများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း (၂၀၁၆) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
မှတ်ချက်များ - ပြင်သစ်စကားပြောအမျိုးသားများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) လေ့လာမှုအရပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် erectile လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ သို့တိုင်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာသုံးစွဲသူများသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်စွဲလမ်းမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အမျိုးသား ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤလေ့လာမှုသည်အရှိန်မြင့်တက်နေသည်ဟုအစီရင်ခံရသည်။ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဟုတ်ခဲ့။ " စိတ်ဝင်စားစရာမှာပါဝင်သူ ၂၀.၃% ကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ“ငါ့အဖက်နဲ့အတူ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။ " (Rob Weiss သည်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်သည် ဒီလေ့လာမှုကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ.)
မှတ်ချက် - OSAs များသည် '' အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ '' ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဖြေဆိုသူ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ရလဒ်များကဖော်ပြသည် ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုပြဿနာ OSAs နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ဒေတာ OSAs အတွက်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူယောက်ျားအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၌ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတတ်ပြီးထိန်းချုပ်များ၏အခက်အခဲကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါတစ်ခုပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤ ရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် arousal ၏မြင့်မားသောအဆင့်သတင်းပို့ယခင်လေ့လာမှုများအဲဒီချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al, 2013; ။ Muise et al, 2013) ။ "
သာ. ကြီးမြတ်မတရားသောသို့မဟုတ်လိုသော, သေးစစ်မှန်သောမိတ်ဖက်နှင့်အတူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူဒွန်တွဲအောက်ပိုင်း arousal နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု: ဤရလဒ်များကိုဿုံအဆိုပါ porn-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူယောက်ျား၏အတှေ့အကွုံကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ပါဝင်သူများ၏ ၂၀.၃% ကသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ“ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုနှိုးဆွရန်” ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ပါ ၀ င်သူများက "ပုံမှန်မဟုတ်သောသို့မဟုတ်ယုတ်ညံ့သော" ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းကိုလည်းတင်ပြခဲ့သည်။ ကောက်နှုတ်ချက် -
ရလဒ်များအရအမျိုးသားများကရှာဖွေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အဓိကအားဖြင့်“ ရိုးရာ” (ဥပမာ၊ လိင်အင်္ဂါလိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်၊ အပျော်တမ်းဗီဒီယိုများ) paraphilic နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအကြောင်းအရာများ (ဥပမာ - fetishism, masochism / sadism) ရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။ မကြာခဏရှာဖွေလေ့မရှိသော“ ပုံမှန်မဟုတ်သော” သို့မဟုတ်“ အယောင်ဆောင်သော” အခြင်းအရာဟုယူဆရသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏသုတေသနပြုခဲ့သည် (ဆယ်ကျော်သက် ၆၇.၇%၊ အုပ်စုလိုက်လိင် / ဂိုဏ်းဝင်ပေါက်၊ ၄၃.၂%; ရိုက်တာ၊ ၂၂.၂%; bukkake, ၁၈.၂%) နှင့်ကျွန်စနစ် , 67.7%) ။ "
လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူများအကြား“ ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှု” နှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူရန်စံသတ်မှတ်ချက်များမှာ (၁) လွန်ခဲ့သော ၃ လအတွင်း porn အသုံးပြုခြင်းနှင့် (၂) ပြင်သစ်စကားပြောအမျိုးသားများဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နမူနာ ၂၇.၆% သည် OSAs ၏စားသုံးမှုကိုပြassessedနာအဖြစ်ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် (n ၁၁၈) မှ ၃၃.၉% သည်သူတို့၏ OSAs နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင်အကူအညီတောင်းခံရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။ ”
“ အနာဂတ်သုတေသနသည်အမျိုးသားများအတွက် OSAs တွင်ပါ ၀ င်သောပြproblemနာပါ ၀ င်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုတွင်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များ၏အခန်းကဏ္furtherကိုထပ်မံစုံစမ်းသင့်သည်။ အထူးသဖြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏တူးဖော်သုတေသန၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းလမ်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ အော့ဖ်လိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အနာဂတ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ယနေ့အချိန်အထိ OSAs ၏ပြproblemနာကိုအသုံးပြုခြင်းသည် OSAs ၏ထူးခြားမှုနှင့်တိကျမှု (သို့) သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်ပြuseနာများအသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများမူဘောင်အတွင်း၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ - အရည်အသွေးပြည့်မီသောအင်တာဗျူးများသည်ပြAနာရှိသော OSA အသုံးပြုမှု၏ဖြစ်ရပ်များကိုနားလည်ရန်တန်ဖိုးရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလက်တွေ့နမူနာများဖြင့်ပြုလုပ်သင့်ပြီးရေမြှုပ်ခြင်းနှင့်အခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သည့်အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည့် 3D လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းများစသည့် OSAs အမျိုးအစားများကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ ”
Alin Wéry,, ဂျေ Billieux
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (OSAs) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအထူးသဖြင့်ယောက်ျားအတွက်, နေရာအနှံ့ဖြစ်ပြီး, အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာ OSAs နှင့်အတူသက်ဆိုင်တဲ့အန္တရာယ်အချက်များ, သို့သော်, ဆက်လက်တည်ရှိညံ့ဖျင်းစူးစမ်း။ ယောက်ျား OSAs အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နဲ့ပြဿနာ OSAs နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်အချက်များ disentangle ရန်အဘို့အဝိသေသလက္ခဏာများ, အသုံးပြုမှုပုံစံများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ပြီးလက်ရှိလေ့လာမှု။ ဒီအဆုံး, 434 ယောက်ျား OSAs, ပြဿနာ OSAs လက္ခဏာတွေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အလူမှုလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ OSAs စားသုံးမှုအလေ့အထများ, စိတ်ရင်းတိုင်းတာခြင်းအွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။
ရလဒ်များညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အများဆုံးပျံ့နှံ့ OSA ဖြစ်ပြီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့် OSAs ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်အများဆုံးမကြာခဏရည်ရွယ်ချက်ကကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အပိုဆောင်းမျိုးစုံဆုတ်ယုတ်အောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများ OSAs ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောညွှန်ပြလေ့လာဆန်းစစ်: (က) ပူးပေါင်း-arousal လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာလိင်ချက်တင်) နှင့်တိုက်ပိတ်-arousal လှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာညစ်ညမ်း); (ခ) အမည်မသိယဉျနှင့်စိတ်ဓါတ်များစည်းမျဉ်းစိတ်ရင်း; (ဂ) အဆင့်မြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကို။
ဒီလေ့လာမှုကပြဿနာ OSAs သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဖြစ်ကြပြီးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းအဓိကထားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ, စိတ်ရင်းနှင့် OSAs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်သစ်ကိုအလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက် OSA အမျိုးအစားနှင့်တစ်ဦးချင်းစီစွန့်စားမှုအချက်များနှစ်ဦးစလုံးမှကြိုတင်ကာကွယ်လုပ်ရပ်များနှင့်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်၏စက်ချုပ်ထောက်ခံပါတယ်။
keywords: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ; Cybersexual စွဲ; ပြဿနာအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ; စိတ်ရင်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု
OSAs ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ၎င်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များလည်းနည်းနည်းအာရုံစိုက်မှုခံရကြပြီ။ အထူးသဖြင့်, ပြဿနာအသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှနိုင်ကြောင်းနှစ်ခုအချက်များခဲစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီ: OSAs အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် (ခ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ရှေ့မှောက်တွင် (ဆိုလိုသည်မှာယင်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းမောင်းထုတ်ကြောင်း (က) တစ်ဦးချင်းရည်ရွယ်ချက်များ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်, သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောအခြေအနေများအောက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုရရှိရန်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး).
ယနေ့အထိ, လေ့လာမှုများပြဿနာ OSAs စတင်ခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (ဥပမာ, erectile သို့မဟုတ် orgasm မမှန်) ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစူးစမ်းကြပြီချို့တဲ့နေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအချို့အခြပြဿနာ OSAs အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြသောအနည်းငယ်လေ့လာမှုများကနေရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ (2011) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုများ၏ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလိင်စိတ်နိုးထ ratings အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာ OSAs ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ အခြားလေ့လာမှုမှာတော့ Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte နှင့်အမှတ်တံဆိပ် (2013) OSA-related စွဲရောဂါလက္ခဏာထက် သာ. ကြီးမြတ်သောလိင်စိတ်နိုးထ, တဏှာနှင့်ညစ်ညမ်း cue တင်ဆက်မှုကနေရရှိလာတဲ့ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် OSAs နှင့်ဆက်စပ်အပြုသဘောအားကောင်းပြဿနာ OSAs မှ proneness စပ်လျဉ်းကြီးထွား cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ (ဆိုလိုသည်မှာ arousal) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်ထားတဲ့အတွက်ပြဿနာ OSAs ၏ဆန္ဒပြည့်ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ ယင်းအုပ်စုနှစ်စုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးရမှတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွဲပြားဘူးသော်လည်း 2004 တစ်နမူနာထဲတွင်တွေ့ရှိခဲ့ Bancroft နှင့် Vukadinovic (31) ( "လိင်စွဲ" လိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများအတွက်ထက်ယေဘုယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား (ဆိုလိုသည်မှာ arousal) ၏အဆင့်မြင့် selfdefined ဆိုလိုသည်မှာကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှစွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်တားစီး၏ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့်တားစီး) ။ Muise, Milhausen, ကိုးလ်နှင့်ဂရေဟမ် (2013) ကမကြာသေးမီကလေ့လာမှု inhibitory သိမြင်မှု (လိင်စဉ်အတွင်း သာ. ကြီးမြတ်စိုးရိမ်စိတ်ညွှန်ပြ) နှင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏မြင့်မားသောအဆင့်များအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုသတင်းပို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေမယ့်မရ အမြိုးသမီးမြား၌တည်၏။ ဒီလေ့လာမှုကလည်း arousal တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအဆင့်အထိ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးကနေနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာ၏လွယ်ကူခြင်း), ကျား, မများ၏လွတ်လပ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive တစ်အဆင့်မြင့်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏ရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်သဘောသဘာဝနေသော်လည်းကျနော်တို့ယခင်သုတေသန၏အခြေခံပေါ်မှာတော်တော်များများယူဆချက်ရေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နမူနာအထီးသင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်အဖြစ်ပထမဦးစွာကျနော်တို့တိုက်ပိတ်-arousal လှုပ်ရှားမှုများပူးပေါင်း-arousal လှုပ်ရှားမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျက်နှာသာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထား။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော် OSAs အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်, လိင်စိတ်နိုးထ, အာရုံ / အပန်းဖြေ, ခံစားချက်စည်းမျဉ်းများနှင့်ပညာရေး / ထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထား။ ဤအတွန်းအားတွေထဲမှာကျနော်တို့အွန်လိုင်းမှသာရရှိနိုင်ခဲ့ OSAs အတွက်ခံစားချက်စည်းမျဉ်းများနှင့်အတိုးပြဿနာ OSAs နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ တတိယကျနော်တို့ပြဿနာအသုံးပြုမှု arousal / အလိုဆန္ဒနှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (ဥပမာ, erectile နှင့် / သို့မဟုတ် orgasm ရောဂါ) ၏အဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။
Inclusion စံယခင် 18 လအတွင်း OSAs ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးပြင်သစ်စကားပြောအချင်းလူသား, အသက်3နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေ, ဖြစ်ခြင်းခဲ့ကြသည်။
နမူနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသက်အရွယ် 29.5 နှစ်ပေါင်း (; အကွာအဝေး 9.5e18 SD က¼ 72) ဖြစ်ခဲ့သည်။ 59% တည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်း, 89.2% လိင်ကွဲဖြစ်ခြင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
အများဆုံးနေရာအနှံ့ OSA (99%) "သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်း" နှင့် (67.7%) "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွံဉာဏျကိုဖတ်ရှုခြင်း" ကနောက်တော်သို့လိုက် "ကြည့်ရှုညစ်ညမ်း" (66.2%), ဖြစ်ခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အများဆုံးပါဝင်သူပညာရေး၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိခဲ့သူတစ်ဦးတည်ငြိမ်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဖြစ်ကြ၏။ ရလဒ်များယခင်လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုနှင့်ကိုက်ညီသောအရာ, ဖြေဆိုသူတစ်ဦးကြီးများအများစုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့ညွှန်ပြ
အစီရင်ခံအကြောင်းအရာကျောင်းအုပ်ကြီးအမျိုးအစားများ (ဆိုလိုသည်မှာအနည်းဆုံး "အစားစိတ်ဝင်စား" သို့မဟုတ် "အလွန်စိတ်ဝင်စား" ဖြစ်ခြင်းဖြေကြားသူကိုသင်တန်းသားများသည် ဖြစ်. , ဎ 396 ကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေအချက်အလက်များ) အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု (87.9%), ပါးစပ်လိင် (77.8%), အပျော်တမ်းဗီဒီယိုတွေကိုခဲ့ကြသည် (72%), ဆယ်ကျော်သက် (67.7%), နဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံ (56.3%)
လေးဆယ်ကိုးရာခိုင်နှုန်းဟာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့မှာအနည်းဆုံးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေနေသို့မဟုတ်ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, 61.7% မှာအနည်းဆုံးတခါတရံ OSAs အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ရှိခံစားချက်တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအစီရင်ခံမခံခဲ့ဘူးကြောင်းကို OSAs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြဿနာအဖြစ် OSAs ၏နမူနာ Self-အကဲဖြတ်သူတို့ရဲ့စားသုံးမှု 27.6% ။ သူတို့ကို (ဎ 118) အနက် 33.9% ဟာသူတို့ရဲ့ OSAs နှင့် ပတ်သက်. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီတောငျးစဉ်းစား
ကျနော်တို့ကဒီအပြုအမူသင်တန်းသားများကိုသာသေးငယ်တဲ့အချိုးအစား (5.6%) ကအစီရင်ခံခဲ့သည်အတိုင်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကနေ "လိင်လုပ်သားများဆက်သွယ်ခြင်း" ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဤသို့ဖော်ထုတ် OSAs တခြားအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လက်ရှိနမူနာကိုယ်စားလှယ်ရုံးမဟုတ်ပါဘူး
((ခ) ကိုစိတ်ရင်း OSAs သုံးစွဲဖို့, OSA (က) အမျိုးအစားများ (သုံး variable တွေကို): သုံးကွဲပြားဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအန္တရာယ်အချက်များအမျိုးအစားသုံးမျိုးမှလေးစားမှုနှင့်အတူ (ထို့-IAT-sex1 အပေါ်အခြေခံပြီး) စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည် ခြောက်လ variable တွေကို) နှင့် (ဂ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (ငါး variable တွေကို) ။
တတိယဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကို OSAs ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြဿနာ OSA အသုံးပြုမှုလှုပ်ရှားမှု၏ဦးစားပေးအမျိုးအစား (ပူးပေါင်း-arousal လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တိုက်ပိတ်-arousal လှုပ်ရှားမှုများ), တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များ (စိတ်ဓါတ်များစည်းမျဉ်းများနှင့်အမည်မသိယဉျ) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အနိမ့် erectile function ကို) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည် ။အကွိမျမြားစှာဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ဤအန္တရာယ်အချက်များအနက် OSAs အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိတ်ရင်းစွဲရောဂါလက္ခဏာတွေမှကျရောက်နေတဲ့မှအများဆုံးဆက်နွယ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။
မှတ်စု၏ရလဒ်များကိုအများဆုံးညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာယောက်ျားကရှာဖှေကွောငျးဖျောပွခဲ့ပေမယ့် paraphilic နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအကြောင်းအရာ (ဥပမာ, fetishism, masochism / sadism) နဲ့, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ (ဥပမာအင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ, အပျော်တမ်းဗီဒီယိုများ) "ရိုးရာ" ဖြစ်ပါတယ် လျော့နည်းမကြာခဏရှာဖွေခံရခြင်း, မကြာခဏ "ပုံမှန်မဟုတ်သော" သို့မဟုတ် "deviant" ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းအချို့ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာမကြာခဏ (; အုပ်စုသည်လိင် / ဂိုဏ်းပေါက်ကွဲသံကြီး, 67.7%; ရိုက်တာ, 43.2%; bukkake, 22.2%; နှင့်ကျွန်ခံ, 18.2% ဆယ်ကျော်သက်, 15.9%) သုတေသနပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကြောင်းပြသ solitary- နှင့်မိတ်ဖက်-based နှစ်ဦးစလုံး OSAs ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားအချက်များအနက်, ငါတို့ OSAs အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိတ်ရင်းစွဲလမ်းအသုံးပြုမှုအကြီးဆုံးအချိုးအစားကိုရှင်းပြနှင့်စိတ်ဓါတ်များစည်းမျဉ်းများနှင့်အမည်မသိယဉျအများဆုံးပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အမည်မသိယဉျနှင့်စပ်လျဉ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ရော့စ် et al ၏သူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ (2012), တိကျတဲ့ညစ်ညမ်းအကျိုးစီးပွား OSAs ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပြခဲ့သူ။
လက်ရှိလေ့လာမှုရလဒ်များလည်းပြဿနာ OSAs ပြသယောက်ျားအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုအတွင်းတွေ့ကြုံရသောစိုက်ထူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားပြီးသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် OSAs ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ဆိုးဝါးသောစက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည် Muise et al နှင့်လည်းကိုက်ညီပါသည်။ (၂၀၁၃) တွင်ယောက်ျားများသည်လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စပြန့်ပွားမှုနှုန်းနိမ့်ကျခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးလျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှု၏ရလဒ်များအရတားဆီးဟန့်တားနိုင်သည့်သိမှတ်မှုနှုန်းမြင့်မားသောယောက်ျားများသည် (လိင်ဆက်ဆံစဉ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုဖော်ပြသည်) ကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်နှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများနှင့်အတူရင်းနှီးမှု၊ (Sun, Bridges, Johnason & Ezzell, 2013) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များကြောင့် OSA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုတွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများကိုရှုပ်ထွေးစေရန်လေ့လာမှုအသစ်များ၏ဒီဇိုင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ဒီလေ့လာမှုကတိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့် OSAs အတွက်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်များပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုပြဿနာ OSAs နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ။ လက်ရှိဒေတာများအရ OSAs တွင်ပြaticနာများပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများသည်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုရှိနိုင်ပြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဤလိင်ဆိုင်ရာတွန်းအားကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲများကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ ဤရလဒ်သည်လိင်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်မှုမြင့်မားသောနှိုးဆွနိုင်သည့်အဆင့်ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည် (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al, 2013; Muise et al, 2013) ။
အနာဂတ်သုတေသနသည် OSAs တွင်အမျိုးသားများ၏ပြaticနာပါ ၀ င်မှုအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များ၏အခန်းကဏ္furtherကို ထပ်မံ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ အော့ဖ်လိုင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုများကိုပိုမိုနားလည်ရန်အနာဂတ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ယနေ့အချိန်အထိ OSAs ၏ပြproblemနာကိုအသုံးပြုခြင်းသည် OSAs ၏ထူးခြားမှုနှင့်တိကျမှု (သို့) သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်ပြuseနာများအသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများမူဘောင်အတွင်း၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ - အရည်အသွေးပြည့်မီသောအင်တာဗျူးများသည်ပြAနာရှိသော OSA အသုံးပြုမှု၏ဖြစ်ရပ်များကိုနားလည်ရန်တန်ဖိုးရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလက်တွေ့နမူနာများဖြင့်ပြုလုပ်သင့်ပြီးရေမြှုပ်ခြင်းနှင့်အခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သည့်အစိတ်အပိုင်းများပါ ၀ င်သည့် 3D လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂိမ်းများစသည့် OSAs အမျိုးအစားများကိုအဓိကထားလေ့လာသင့်သည်။
နယူးလေ့လာမှု Links များ compulsive Porn အလွဲသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် [ရော့ Weiss အားဖြင့်လေ့လာမှုအကြောင်းကိုအပိုဒ်]